आफ्नो संगत सहि छ कि गलत भन्ने कसरी चिन्ने ? ७ सजिला लक्षणहरु - उज्यालो पाटो
तपाईलाई थाहा छ, अबको पाँच बर्षमा तपाई कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने तपाई आफुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि अबको दिनमा तपाईको हैसियत र आम्दानी कस्तो हुनेछ । यसका लागि कुनै ज्योतिषी ज्ञान चाहिदैन । कतै चिना टिपन वा हात हेराएर यो बारे भन्न सकिदैन । यो थाहा पाउँन सजिलो छ । एक पटक आफ्नो संगत हेर्नुहोस् ।
भनिन्छ, मानिस आफुले संगत गर्ने ५ जना मानिसहरुको औसत हुन्छ । अर्थात, आफुले संगत गर्ने ५ जना साथीहरुको बानी ब्यवहार, आचरण र उन्नति प्रगति जस्तै जस्तै आफ्नो पनि बानी ब्यवहार, आचरण र उन्नति प्रगति हुने गर्छ । संगतले यति धेरै फरक पार्छ ।
सामान्य प्रश्नको जवाफ दिनुहोला । रुघा कसरी सर्छ ? पक्कै पनि रुघा लागेका मान्छेको नजिक पर्नाले । संगतको कुरा पनि त्यस्तै हो । राम्रो र सकारात्मक सोच भएका मानिसहरुको छेउ पर्नु हुन्छ भने तपाईमा पनि त्यहि कुराको प्रभाव देखिन्छ । खराब र नकारात्मक सोचले भरिएका मानिसहरुको संगतमा पर्नु भयो भने या त तपाईले आफुलाई कुनै दिन जेल भित्र भेट्नुहुन्छ, या शारिरिक, आर्थिक र नैतिकरुपमा उठ्नै नसक्ने गरि थला परेको अवस्थामा ।
साथी संगत यति प्रभावशाली कुरा हो । यसलाई कम आँक्ने गल्ति गर्नु महंगो सावित हुन सक्छ । त्यसो भए सहि संगत कसरी चिन्ने त ? कसलाई राम्रा साथी मान्ने त ? यसको जवाफ गाह्रो छैन । केहि संकेतहरुको अवलोकन गरेर प्रस्ट थाहा पाउँन सकिन्छ कि संगत ठिक छ कि छैन !
१. संगत रमाइलो छ
संगत गर्दा रमाइलो नहुने अवस्थामा कसैले पनि संगत गरिराख्दैन । तपाईको साथी सहि छ या छैन र तपाईको संगत सहि छ या छैन भन्ने कुरा कतिको रमाइलोसँग तपाईको साथ बित्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन । बरु त्यो रमाइलो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।
तपाईलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ, संगतमा तपाईहरुले गर्ने रमाइलोले तपाईहरुलाई क्षणिक फाइदा मात्रै दिइरहेको छ कि सँधै यस्तो चल्न सक्छ ! आफ्नो मनलाई सोध्नुहोस् । आफ्नो ठाउँमा अरुलाई राखेर हेर्नुहोस् । पक्कै थाहा हुन्छ ।
राम्रो संगतमा सृजनशीलतमा रमाइलो हुन्छ । खराब संगतमा नकारात्मकतामा र तडकभडकमा । रक्सीको नसामा डुबेर रमाइलो गर्नु र कुनै सृजनशील काम गरेर रमाइलो गर्नु कति फरक छ भन्ने कुरा त तपाई स्वयमले थाहा पाउँनुहुन्छ ।
संगत कस्तो छ भन्ने कुरा रमाइलो कति छ भन्ने मानकका आधारमा निष्कर्षमा नपुग्नुहोस् ।
२. छायाँ जस्ता साथी
छोटकरीमा भन्दा छायाँ जस्ता साथीको जीवनमा काम छैन । छायाँ उज्यालोमा मात्रै बन्छ तर जति उज्यालोपना घट्न थाल्छ, छायाँ हराउँन सुरु हुन्छ । अन्धकार रातमा छायाँ कतै पनि हुदैन ।
तपाईको सजिलो समयमा मात्रै देखिने साथी वास्तवमा साथी नै होइनन् । तपाई अफ्ठ्यारोमा पर्दा तपाईका भन्दा ठुला समस्या सुनाएर तर्किनेहरुबाट तपाईले कस्तो साथ पाउँनु हुन्छ र तिनलाई साथी मान्नुहुन्छ ? वास्तवमा साथी चाहिने भनेकै अफ्ठ्यारो बेलामा हो, जीवनको अँध्यारो समयमा हो । जहाँबाट कोही साथीले बाहिर निकाल्दियोस् ।
तपाईले संगत गरेका मानिसहरुले तपाईलाई अफ्ठ्यारो पर्दा देखाउँने व्यवहारका बारेमा ध्यान दिनुस् । उनीहरुका बहाना सुन्नुहोस् । उनीहरुले तपाईलाई गर्ने सहयोगका बारेमा निष्पक्ष टिप्पणी गर्नुहोस् । संगत सहि छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउँन सक्नुहुन्छ ।
३. तपाईलाई देउता मान्ने साथी
तपाईलाई देउता मान्ने साथी मैले यहाँ दुई कारणहरुको आधारमा लेखेको छु । पहिलो कारण हो, यस्ता साथी जो उसलाई दुख पर्दा मात्रै सम्झिन्छ तर सुखमा र सामान्य अवस्थामा तपाईलाई वास्तै गर्दैन । यो कुरा अकारण नै पटक पटक हुन्छ भने सम्झिनुहोस् तपाईको उ साथी होइन ।
तपाईलाई देउता मान्ने साथीको दोस्रो कारण हो, तपाईको देवत्वकरण । तपाईको संगतमा तपाईलाई यसरी मान्छन् कि मानौँ तपाई देउता हो । तपाईमा कुनै गल्ति कमजोरी नै छैनन् । तपाईले गरेका हरेक कुराहरुको ति समर्थन मात्रै गर्दैनन्, बरु उल्टै गजबै राम्रो हो भनेर तारिफ गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बुझ्नु पर्छ, तपाईलाई तिनले प्रयोग गर्दैछन् । तपाईसँग भएको स्रोत वा साधन वा सामर्थ्य केहि उनीहरुलाई चाहिएको छ र तपाईलाई फकाउँदैछन् ।
राम्रो साथीले तपाईका कमजोरीहरुका बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छ । गाली गर्छ । रोक्छ । तर, तपाई रिसाउँनु हुन्छ भनेर बनावटी तारिफमा उत्रिदैन । तपाईलाई मान्छे बनाइराख्छ । देउता बनाउँदैन ।
४. सुदामाको प्रश्न
एक पल्ट सुदामाले कृष्णलाई सोधे रे, “कृष्ण ! हाम्रो मित्रता देखेर संसार चकित पर्छ । वास्तवमा मित्रताको मतलब के हो ?” कृष्णले सुदामालाई जवाफ फर्काएछन्, “यदि मित्रतामा मतलब रह्यो भने त्यो मित्रता नै कहाँ रह्यो र ?”
यसबारे धेरै भन्न वा सोच्न आवश्यक छैन । कसैले मतलबका लागि मात्रै तपाईसँग सम्बन्ध राखेको छ भने त्यो व्यवसायिक वा अन्य किसिमको संगत हुन सक्ला तर मित्रताको संगत होइन ।
५. तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो ? कस्तो हुनु भो ?
सबै भन्दा महत्वपुर्ण र विशेष लक्षण हो यो । तपाई आफुले आफैलाई नियाल्नुहोस् । जुन व्यक्तिहरुलाई तपाईले आफ्नो राम्रो साथी भनेर संगत गरिराख्नु भएको छ, तिनको संगत पछि तपाई कस्तो हुनु भयो ? तपाईमा कस्ता कस्ता परिवर्तन आए ?
तपाईमा राम्रा परिवर्तन आएका छन् भने तपाईको संगत राम्रो छ । तपाईमा आएका परिवर्तनहरु राम्रा छन् वा ठिकै हुन् नि भन्नका लागि अनेक तर्क र कुतर्क गर्न थाल्नु पर्छ भने तपाई आफैलाई ठग्दै हुनुहुन्छ । तपाईले गर्नु भएको संगत सहि छैन । छोड्नुहोस् ।
६. योजनाका बारेमा पछि कुरा गरुम्ला न
तपाई कुनै योजना बनाएर उत्साहित हुनुहुन्छ । तपाईलाई लाग्छ कि त्यो योजना सृजनशील छ, उपयोगी छ र गजब छ । तपाई आफ्नो साथी संगतमा त्यो योजना सुनाउँनु हुन्छ । साथीले कुनै उत्साह बिना भन्छ, “योजनाका बारेमा पछि कुरा गरुम्ला न । अहिले रमाइलो गरौँ ।” र, यस्तो पटक पटक हुन्छ ।
तपाईका कुनै पनि योजनामा उनीहरु सामान्य अवस्थामा प्रतिक्रियासम्म दिदैनन् । यस्तो संगतले तपाईलाई ओरालो मात्रै लगाउँछ । साँचो साथीले तपाईको योजना सुन्छ । कमजोरी पत्ता लगाउँछ र झन् सुधार्छ ।
७. साथीको अनुहार
‘संगत गर्न साथीको अनुहार पनि राम्रो हुनुपर्छ’ यदि यसलाई शर्त राखिन्छ भने यो संगत र मित्रताको सबै भन्दा कलंकित शर्त हुनेछ । अनुहार वा शारिरिक बनावटले संगत कस्तो भन्ने कुरामा रौँ जति पनि फरक पार्दैन । यहाँ मैले उठाउँन खोजेको कुरा अर्कै छ ।
मानौँ, तपाईसँग आफ्नो नीजि जीवनको उत्साहपुर्ण खुसीको कुरा छ । तपाईले साथीलाई त्यो कुरा सुनाउँनु भयो । साथीको अनुहार कस्तो हुन्छ ? तपाईको जो साथी हो, त्यो वास्तवमा साथी बन्न लायक छ कि छैन भन्ने कुराको निर्णय यस्तो अवसरमा उसको अनुहारले गर्छ । अर्थात, उ तपाईको खुसीको समाचारले खुसी बन्यो कि दुखी ? जान्नु पर्ने कुरा यो हो । सामान्य इर्ष्या वा मेरो पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना देखाउँनु स्वभाविक हो तर तपाईको खुसीमा दुखी हुनु ? पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । यस्तो संगत सक्दो चाँडो छोड्नुहोस् ।
याद गर्नुपर्ने कुरा, विद्धानहरुले भनेका छन् – खराब संगत गर्नु भन्दा एक्लै हुन राम्रो हुन्छ ।
ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता बढाउँने १० व्यवहारिक उपायहरु